Global Voices teny Malagasy » Loko Mena, Fijokoana ary Fanafihana An-tserasera: Manameloka Ny Firongatry Ny Herisetra Ny Gazety Mpanohana An’i Beijina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Marsa 2017 5:18 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Arimalala
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Ny pejy voalohan'i Sing Pao mamely an'i Zhang Dehang, 3 Oktobra. Sary: Sing Pao avy amin'ny Hong Kong Free Press.
Nosoratan'i Elie Ng ity lahatsoratra ity ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 3 Febroary 2017 . Ity dika manaraka ity dia navoaka eto amin'ny Global Voices tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Milaza ny gazety Sing Pao mpiseho isanandro mpomba an'i Beijina fa lasibatra ireo mpiasa ao aminy taorian'ny namoahan'izy ireo tantara maro mitsikera ilay manampahefana laharana fahatelo ao Shina, Zhang Dejiang, ny Tale Jeneraly Leung Chun-ying sy ny Biiraon'ny Fifandraisana ao Shina, biraon'i Beijina ao an-tanàna.
Nilaza ilay gazety amin'ny fiteny Sinoa fa nihamafy ny fandrahonana ireo mpiasa ao aminy tato ho ato ary in'efatra tao anatin'ny herinandro no nitady fanampiana tamin'ny polisy ireo mpiasa tao. Ny tatitra farany napetraka tany amin'ny polisy dia natao tamin'ny marainan'ny 26 Febroary, taorian'ny namenoan'ny olona loko mena ny varavaran'ny tranon'ny lehiben'ny famoahan-dahatsoratry ny Sing Pao.
Araka ny filazan'ny Sing Pao, niverina nody teo ambany fiarovan'ny mpitandro filaminana ilay lehiben'ny famoahan-dahatsoratra. Hitan'izy ireo ny varavaran'ny tranony rakotra loko mena izay matetika ampiasaina ho mariky ny fampitandremana. Nisy ihany koa sarin'ilay mpamoaka lahatsoratra sy sariben'ny Talen'ny Sing Pao, Gu Zhuoheng, napetaka tamin'ny tambohon'ny tranony.
Manahy ny gazety fa nisy nanakarama olona avy amin'ny triady (fikambanan-jiolahy mpanatanteraka heloka voaomana) mba hanao izao fihetsika izao. “Manameloka mafy” ilay asa tsy ara-dalàna izy, ary nanentana ny polisy hisambotra ireo meloka.
Nolazain'ny Sing Pao fa toa midika ho fampanginana ny gazety ireo fandrahonana, izay fantatra amin'ireo fanafihana tsy mitonona anarana  ataony amin'ilay sendikà politika mifandray amin'ny manampahefana ambony, Zhang Dejiang, Leung Ying ary ny Biraon'ny Fifandraisana.
Taminà fanambarana tamin'ny 26 Febroary, nilaza ny fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Hong kong fa “manameloka mafy ny firongatry ny herisetra sy ny fandrahonana” atao amin'ilay gazety.
Ny fampielezan-kevitra fampihorohoroana, izay nitohy herinandro mahery izao, dia miharihary fa fikasàna manafintohina hampanginana ny gazety.
Tena fihantsiana ny lalàna sy ny filaminam-bahoaka ao Hong Kong izany sady fandrahonana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety izay voarakitra ao anatin'ny Lalàna fototra.
Nantsoin'ny fikambanana ireo manampahefanamba hametraka ezaka amin'ny fitandroana ny filaminana mba hiarovana ny mpiasan'ny Sing Pao ary hanao ny fisamborana.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny polisy fa “tena miasa saina” amin'ilay zava-mitranga ny mpitandro filaminana. Nolazainy fa ny Sampan-draharaha misahana ny Heloka Bevava any amin'ny Faritra Atsinanan'i Kowlon dia manaraka ilay raharaha ary hiaro ireo olona voakasik'izany.
Fijokoana sy Fanafihana an-tserasera
Tamin'ny herinandro lasa teo, namoaka fanambarana maika  ilay gazety nilazàny fa misy olona nandefa trakta fandrahonana ireo mpiasa mpitantana ao amin'izy ireo teny ivelan'ny tranony. Manambara izy fa ireo sary ao anatin'ilay trakta dia toa nalaina avy tamin'ny taratasy fahazoana mivezivezy omen'ny manampahefana Shinoa ho an'ny teratany ao Hong Kong ahafahan'izy ireo miditra ny taniben'i Shina.
Nanambara koa ilay gazety fa “nisy olona maromaro mampiahiahy izay mitovy amin'ireo avy any amin'ny tanibe” nihaodihaody teny ivelan'ireo biraony ary nanaraka ireo mpitantana ao nanomboka tamin'ny tapaky ny volana febroary.
Nanampy koa izy fa in-droa ny tranokalany no niharan'ny fanafihana an-tserasera tamin'ny 18 sy 19 Febroary.
Ahian'ny gazety ho antony ara-politika no manisika ireo fandrahonana ireo, ary “ikendrena ny hanelingelina ny vokatry ny fifidianana izay ho lehiben'ny mpanatanteraka.” Ampangain'izy ireo ho i Leung sy ny Biraon'ny Fifandraisana ao Shina no ao ambadik'ireo fanafihana,
Tamin'ny volana lasa, sambany noraràna tsy hiditra tao amin'ny sakafon'ny fetin'ny taombaovao nokarakarain'ny Biraon'ny Fifandraisana ireo mpanao gazety avy amin'ny Sing Pao. Nilaza ny gazety fa notenenin'ny mpandray olona ireo mpanao gazetin'izy ireo: “Tsy mahazo alalana hitatitra ity hetsikay ity ianareo”.
Hatramin'ny volana Aogostra lasa teo, nanao fanehoankevitra tsy mitonona anarana mamely an'i Zhang, Leung ary ny Biraon'ny Fifandraisana ny Sing Pao. Nilaza izy fa hoesorina eo amin'ny fahefana ireo manampahefana mpanao kolikoly.
Milaza koa izy (ny gazety) fa mety tsy hahazo hilatsaka ho fidiana  i Leung, andro vitsy talohan'ny nilazan'ilay lehiben'ny mpanatanteraka fa mety hilatsaka fanindroany izy.
Nitarika sahoan-dresaka hoe misaratsaraka ireo mpanohana an'i Beijina any Hong Kong  ireo fandrahonana ireo, ary voaomana hamongotra sehatra iray mahery vaika ao anatin'ny antoko Kaominista ny Filoha Shinoa Xi Jinping.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/28/96360/
 tamin'ny 3 Febroary 2017: https://www.hongkongfp.com/2017/02/27/red-paint-stalking-pro-beijing-newspaper-condemns-escalated-violence-aimed-silencing-dissent/
 fanafihana tsy mitonona anarana: https://www.hongkongfp.com/2016/10/03/rivals-of-xi-encourage-liaison-offices-meddling-in-hong-kong-claims-pro-beijing-newspaper/
 namoaka fanambarana maika: https://www.hongkongfp.com/2017/02/22/pro-beijing-anti-cy-leung-paper-sing-pao-says-management-received-serious-threats-website-attacked/
 mety tsy hahazo hilatsaka ho fidiana: https://www.hongkongfp.com/2016/12/13/cy-china-liaison-office-director-next-chop-triumphant-pro-beijing-paper-claims/
 sahoan-dresaka hoe misaratsaraka ireo mpanohana an'i Beijina any Hong Kong: https://www.hongkongfp.com/2016/09/24/how-the-pro-beijing-sing-pao-newspaper-turned-against-cy-leung/